Knowledges Zone: မြန်မာအိုင်တီပညာရှင်များ ရေးဆွဲသည့် VOIP ဖုန်းစနစ် စတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မည်
မြန်မာအိုင်တီပညာရှင်များ ရေးဆွဲသည့် VOIP ဖုန်းစနစ် စတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မည်
Free Talky နည်းပညာ
FreeTalky က ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး G.729 Codec နည်းပညာကို အသုံးပြုထားလို့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်စပိ 1.6kb မှ 6.8kb ရှိရုံနှင့် ဖုန်းခေါ် နိုင်တယ်နော်! Speex Ultra-wideband ပါဝင်နေတော့ အသံကြည်လင်ပြတ်သားမှု အကောင်းဆုံးလို့ ပြောရင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊ လက်တွေ့သာ ပြောကြည်ဗျာ! Skype နဲ့ pfingo တို့ထက်သာတယ်! Gtalk လိုမျိုး Voice chat နဲ့ IM (chat) တွေလဲ အခမဲ့ သုံးလို့ရတယ်ဗျိုး!
Web phone ၏ အားသာချက်များ
Web phone ဖြင့် ခေါ်ဆိုခြင်းသည် Calling Card များနှင့် ခေါ်ဆိုခြင်းထက် လွယ်ကူခြင်း၊ ဈေနှုန်း အလွန်ချိုသာခြင်း၊ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့် ကွန်ပျူတာမှ မဆိုခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း၊ FreeTalky နံပါတ် အချင်းချင်း အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်တစ်ခု ၀ယ်ယူရန် မလိုအပ်ခြင်း။
Web phone ဘယ်လိုသုံးမလဲ
Web phone ဆိုသည်မှာ website(browser based) မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Web phone ဖြင့် လူကြီးမင်း၏ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် နိုင်ငံမှ ဖုန်းကိုမဆို ဈေနှုန်းချိုသာစွာနှင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် လူကြီးမင်းတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး၊ Headset နှင့် FreeTalky Account တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် Java Runtime Environment (JRE) အား (လိုအပ်ပါက) လူကြီးမင်း၏ ကွန်ပျူတာ အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းရပါသည်။ ထိုနောက် စတင်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီ။